20 desambra – (Cf 25 Mars) – Trinitera Malagasy
Izaia 7, 10-14/ sal 23 / Md Lioka 1, 26-38
Rehefa nandray enim-bolana i Joany dia nirahin’Andriamanitra ny Anjely ho any Galilea, ho any Nazareta. Fotoana mampahatsiaro ny andro faha-enina naharian’Andriamanitra ny olombelona, mampahatsiaro ny ora faha-enina nipetrahan’i Jesoa reraka teo akaikin’ny fatsakan’i Jakoba (Joany 4,6), mampahatsiaro ny ora faha-enina nanombohan’ny haizin-kitroka nandrakotra ny tany (Lk 23,44), ora nipetrahan’i Pilaty hitsara an’i Jesoa (Jn 19, 13). Rehefa tonga ny hafenoan’ny fotoana dia nirain’Andriamanitra hamonjy antsika ny Zanany, hoy i Paoly (Gal 4,4).
Miravoravoa ianao ry ilay feno hasoavana: ny Tompo ao aminao; nosoavina noho ny vehivavy ianao. Io no vavaka heveriko fa ventesintsika matetika indrindra amin’ireo nifandovana ato amin’ny Fiangonana: Arahaba, ry Maria. Kanefa indraindray tsy dia dinihina loatra izay tena heviny. I Maria, ilay feno hasoavana, no ilay vehivavy navotan’ilay lehilahy marina mba tsy ho fatin’ny tora-bato amin’ny fanendrikendrehana fa nanitsakitsaka ny fofombadiny, manaporofo izany ny fanivaivana nataon’ny olona an’i Jesoa (tsy teraka tanatin’ny fijangajangana izahay: Jn 8, 41).
Feno hasoavana ilay vehivavy miandry vohoka, mitotototo handeha hisoratra avy any Nazareta ho any Betlehema, avy eo sesitany tany Ejipta ary niverina tany Nazareta indray. Feno hasoavana izy voatery nitady an-janany efa noheverin’ny olona ho adala sy very saina (Mc 3,30ss). Feno hasoavana izy nihatrika ny fanamelohana sy ny fandevenana ny zanany voaheloka ho faty amin’ny hazofijaliana. Feno hasoavana izy nandevina ny Zanany.
Indraindray mifangaro manko ny fiheverantsika ny fahasoavana vokatry ny fiombonana amin’izy Tompo sy ny fahafinaretana mety ho azo amin’ny fiainana mizotra araka ny fanirian’olombelona. Ny fahasoavan’Andriamanitra no nameno ny fiainan’i Masina Maria, ary ny fanekeny ny sitrapon’Andriamanitra no nanamasinany ny fiainany ka nahafahan’izany fahasoavana izany “hanao zava-dehibe”, loharanom-pamonjena ho antsika.
Fototry ny finoantsika manko ny maha-olombelona an’i Jesoa, ilay zanak’Andriamanitra, tena Andriamanitra. Fandalinana sy fampianarana mikasika izany maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an’i Jesoa izany no nimasoan’ny Fiangonana hatrany am-piandohana. Na ny drafitra narahan’i Md Lioka amin’ny fanoratana ny Evanjeliny aza dia manampy antsika hahazo izany Mistery izany, ka hampihatra azy amin’ny fomba fiainana andavanandro.
Nofidian’Andriamanitra manokana i Masina Maria, ny antony hoy i Lioka dia satria nahita ny fanambaniana (απείνωσις tapeinosis) nahazo ny ankizivaviny, nahita ny fahorian’ny vahoakany. Tombom-pitiavana izany, saingy tsy ho an’i Maria ihany fa ho antsika rehetra, ho an’ny olombelona tsirairay. Fa tahaka ny fitiavana rehetra, tsy manery fa miangavy. Ny “eny” nataon’i Maria no mirakitra ny fahalehibeazany, ka izay te ho zanany, izay te ho sambatra miaraka aminy, izay fatra-panaja azy marina tokoa, dia ho lany andro hitanisa ny “arahaba ry Maria” fotsiny, raha tsy mitombo miaraka amin’ny isan’izay voatanisa ny faniriana hanao “eny” amin’ny tolo-pitiavana iantsoan’Andriamanitra antsika mba hahatongavan’i Kristy ho nofo eo amin’izao tontolo izao.
Arahaba ry ilay feno hasoavana, ny Tompo ao aminao (χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ, Kairé, keKaritomenè, Ho Kyrios metà sou. Lk 1, 28). Arahaba moa no nandikana azy, fa fiarahabana manokana kosa no dikany: kairé kekaritomenè: mifalia ianao izay nohasoavina. Antsoin’ny Anjely hifaly i Maria. Araka ny voalazantsika teo aloha dia tsy hoe fiainana milamina, tsy hoe harena sy voninahitra no niainan’i Maria fa “tapeinosis”, tsy fihetren-tena fotsiny fa fiainana tsizarizary, toa tsy afaka ny hiarina akory. Taratr’ilay “Siona” niandry ny fanambaran’Andriamanitra manko i Masina Maria, ao aminy no tanteraka ny fampanantenan’Andriamanitra, niantso ny vahoakany hifaly (Jereo ohatra Sofonia 3,14-18; Zakaria 2, 14; 9,9-10). Tanteraka satria nahay “nanaiky” i Maria.
Ahoana no hahafahana mifaly, ahoana no hahitana ny fahasoavan’Andriamanitra ao anatin’ny fahoriana? Ho an’i Masina Maria manokana dia tsy maintsy hiatrika ny fiainana: iza no hino fa “zanak’Andriamanitra” ilay zaza torotoronina tao an-kibony? Ahoana no hahatsapana fa na eo aza ny fijaliana sy ny adim-piainana dia “tian’Andriamanitra manokana” tahaka an’i Masina Maria isika tsirairay? Dinihontsika amin’izany ny halehibeazan’ny finoan’ity zazavavy kely ity. Isika manko efa nohasoavina mino ny nitsanganan’i Kristy ho velona. I Maria kosa nanomana izany tam-pinoana. Sambatra izy, tsy nahita kanefa nino fa “momba ny vahoakany Andriamanitra”, tsy mandao ny vahoakany Andriamanitra, “ilay Misy” no Anarany, “Emanoela, Andriamanitra monina eto amintsika”.
Rariny araka izany raha “atao tsara laza” (εὐλογημένη eulogèmenè, nadika hoe nosoavina) noho ny vehivavy rehetra i Masina Maria, tsy afaka ny tsy hibanjina ny halehibeazan’ny finoany izay te hanara-dia an’ilay “zanak’Andriamanitra”, vokatr’izany faneken’i Maria izany (καρπός karpos), “ankalazaina” koa. I Maria no loharano nahazoantsika ny “loharanom-pahasoavana” hoy i Md Bernard. Tsy afaka ny tsy hanaja an’i Masina Maria izay te ho tonga mpianatr’i Jesoa.
Ambaran’i Md Lioka fa i Masina Maria no tena “Mpanompon’Andriamanitra” (ἡ δούλη κυρίου·Hè doulè Kyriou, Lk. 1,38). Raha fakafakaina moa ny anarana hoe Maria, ankoatra ireo izay niezahana nadikana azy (malala, kintan’ny ranomasina…), ny fototeny מָרָה (marah) amin’ny teny hebrio dia midika hoe mandà, mihoko, mikomy. Na dia fatra-pandà, fatra-pihoko sy mpikomy aza ilay “zanaka vavin’i Siona”, i Maria kosa, feno hasoavana satria nahay “nanaiky”. Izany fanekena izany no maha-mpanompon’Andrimanitra azy. Tsy fihetren-tena izany, raha ny marina, fa fanandratana kosa, fankalazana (εὐλογέω eulogeo), filazan’i Lioka fa io no ilay “Mpanompovavy” sitrak’Andriamanitra, tsy ambakan’ireo Mpanompon’Andriamanitra hafa voatanisa ao amin’ny Baiboly, toa an-dry Abrahama, ry Moizy, ry Elia Mpaminany.
Asan’ny Fanahy Masina no manavao ny zavatra rehetra. Iraho ny Fanahinao, ry Tompo, dia ho àry ny zavatra rehetra (Salamo 104, 30). Dia tao amin’ny faneken’i Maria no nahafahan’Andriamanitra nanavao ao amin’ny Zanany tonga nofo ny fitiavany antsika rehetra. I Masina Maria kosa, niandry ampitokiana ny fahatanterahan’ny lahatr’ilzay tia mandrakizay: “Aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao”. γένοιτό μοι, (genoito moi, Lk. 1,38), ny matoateny γίνομαι (ginomai), izay midika hoe tanteraka, miseho miariary, fa amin’ny “temps” aoriste optatif, izany hoe lazain’i Md Lioka fa indrakindrafana be ihany i Maria mandrapahatanterak’izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Ny famerimberenana ny fiarahaban’ny Anjely dia tokony halemombelona ao anatintsika ko any hafaliana sitrak’Andriamanitra ho tonga lafatra ao amin’ny zanany rehetra. Ny Teny tonga nofo tao amin’i Masina Maria no maniry koa ho tonga nofo ao amintsika tsirairay avy. Asan’ny Fanahy Masina izany kanefa kosa miankina amin’ny fanekentsika ka amelantsika azy hiasa.
Hanahaka an’i Masina Maria anie isika hanetry tena [izany hoe hankatò ny herin’Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra] sy hiraiki-po amin’izay sitrak’Andriamanitra ary ny fanajana azy anie hanampy antsika hitombo finoana sy hafaliantsika hiandry am-pitokisana ny fahatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra.